यू-जी-ओह! डुएल लि्कहरू अब संयुक्त राज्य र क्यानडा | मा उपलब्ध छन् आईफोन समाचार
यू-जी-ओह! डुएल लि Links्कहरू अब संयुक्त राज्य र क्यानडामा उपलब्ध छन्
यू-जी-ओह! हाम्रो प्रख्यात कार्ड खेलको साथ हाम्रो बाल्यकाल चिह्नित। र यो एक सरल र द्रुत तरीका थियो राम्रो समय लिने र हाम्रा साथीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न। यो घटना समयको क्रममा धेरै कडा रहिरहेको छ, अवश्य पनि, केहि स्थानहरूमा अरूहरू भन्दा बढी। जे होस्, हामी के कुराको लागि चकित भयौं कि तिनीहरूले Yu-Gi-Oh जारी गरेनन्! मोबाइल टेक्नोलोजीमा, केहि यस्तो विस्तार जुन यसको विस्तारलाई सजिलो बनाउँदछ। राम्रो ठीक पोकेमोन गो पछि, यू-जी-ओह आउँछ! डुअल लि Links्कहरू, हाम्रो बाल्यावस्थाको खेलहरूको अर्को जुन हामीलाई फर्काउन मद्दत गर्दछ।
पहिलो कुरा जुन यू-जी-ओहको बारेमा हाम्रो ध्यान खिच्छ! डुएल लि Links्कहरू यसको जबरजस्त तर्क हो, इन-एप खरीदहरू र यस खेलको लागि मूल्यलाई अलविदा भन्छ, केवल चीज तपाईं किन्न सक्नुहुने कार्डको प्याक हो। त्यसोभए तपाईंले सुन्नुभयो, यो कार्डहरू जुन तपाईं खेल्नुहुन्छ र तपाईंले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने तरिका जुन तपाईं प्रगति गराउनुहुनेछ र तपाईंको विरोधीहरूलाई हटाउनुहुनेछ। यो वास्तविक जीवनमा हुने नै छ, त्यसैले हामी बुझ्छौं कि कोनामीले त्यस्ता संवेदनाहरू हाम्रो मोबाइलको स्क्रीनमा स्थानान्तरण गर्न चाहेको छ, त्यसैले हामी खेलमा टेक्नोलोजिकल चरणको सामना गरिरहेका छौं, न कि एक स्पष्ट नगद-बाहिर यसको आशा हुनु अघि। ।
यहाँबाट मैले कोनामीलाई बधाई दिनु पर्छ। हामी जानकारी दिन चाहन्छौं कि भिडियो गेम हाल संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडामा मात्र उपलब्ध छ र युरोपमा विस्तार चाँडै सुरु हुनेछ। थपको रूपमा, तपाईं मिसनहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ जुन तपाईं «पुरस्कारReal वास्तविक पैसाको साथ प्राप्त ती मध्येबाट।
अन्तमा, तपाईले पनि समात्न सक्नुहुन्छ श्रृंखलाका सबै पात्रहरू र नायकहरू। खेलमा यथार्थवादको थप स्पर्शको लागि श्रृंखलाको आधिकारिक डबिंग समावेश छ। कोनामीबाट एक राम्रो काम, यो देख्न बाँकी छ कि यो लोकप्रिय छ वा छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » यू-जी-ओह! डुएल लि Links्कहरू अब संयुक्त राज्य र क्यानडामा उपलब्ध छन्
Wowo उनीहरूले हाम्रो मोबाइल उपकरणहरूको लागि यो भव्य खेल सुरू गर्न कत्ति समय लिएका छन र अझ धेरै कि त PC को लागि वा यसको लायक कन्सोलहरूको लागि खेलको अभावको साथ। राम्रो खबर
ठीक पोकेमोन गो पछि, यू-जी-ओह आउँछ! डुअल लि Links्कहरू, हाम्रो बाल्यावस्थाको खेलहरूको अर्को जुन हामीलाई फर्काउन मद्दत गर्दछ।
वास्तवमा २०१ 2014 पछि यू-गि-ओहदेखि नै खेल छ! द्वैव उत्पादन, तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि यो दोस्रो भाग हो
नाइरिकलाई जवाफ दिनुहोस्
मार्केटपल, तपाईको बैठक पोइन्ट खरीद र बिक्री एप्पल उत्पादनहरु